Budata TorrentRover maka Windows
Free Budata maka Windows (8.90 MB)
TorrentRover bụ a free omume na-azọpụta gị nsogbu nke na-achọ nchebe iyi faịlụ na-enye ohere nbudata site na-ewu ewu iyi saịtị. Mmemme a, nke na-achịkọta ọdịnaya sitere na isi mmalite dịka KickAssTorrents, ThePirateBay, IsoHunt, ExtraTorrent, bụ otu nime ihe kachasị mma netiti mmemme iyi.
Dị ka ị maara, iyi saịtị na-ibudata fim na TV usoro na egwuregwu na-adịghị na-enye kpamkpam mma ọdịnaya. Ihe ọbụla ị họọrọ, nagbanyeghị etu o si ewu ewu, faịlụ iyi ndị ibudatara na-abụkarị nke obi ọjọọ, ma mmapụta bụ ego mgbe ị na-ebudata iyi. TorrentRover pụtara noge a. Ọ na-enye anyị ohere ịnweta ọdịnaya dị nchebe kpamkpam site na iwepu ụmụ ahụhụ na ụwa iyi.
Naanị ezi ihe banyere TorrentRover abụghị na ọ na-enye nhọrọ ọdịnaya sitere na saịtị iyi egwu. Site na nyocha zuru ezu na nzacha nzacha, ị nwere ike iru kpọmkwem ihe ịchọrọ netiti ọtụtụ nde iyi wee budata ha ozugbo na enweghị nzute ọ bụla. Ọ bụrụ na faịlụ ị ibudatara bụ ihe nkiri, ịnwere ike ịnweta ozi gbasara ihe nkiri ahụ site na ịpị njikọ IMDB ma ọ bụ site na ibe Wikipedia, ị nwere ike ịlele ụgbọala na-adọkpụ na YouTube.
Akụkụ ọzọ nke mmemme m masịrị m bụ na ọ gbasara ndị na-ege ntị na usoro ahụ. Kama ịchọ na nbudata mgbe ọhụụ ọhụrụ nke usoro ị na-agbaso mgbe niile na agbasa ozi, ị nwere ike inye usoro ihe omume ihe akpaka nbudata iwu ma budata ya ozugbo a na-ebipụta ọhụụ ọhụrụ ahụ.
Nha faịlụ: 8.90 MB
Enwere ike ịchọta IP nonwe ya site na IPntanetị, ya mere ọ dịkwuo nchebe karịa adreesị IP ọha. ...
Mozilla Thunderbird, onye na - azụ ahịa ozi ngwa ngwa, nke bara uru ma baa uru, na - abịawanye oke...
Open Broadcaster Software, ma ọ bụ OBS na nkenke, bụ sọftụwia na - eweta nefu na - enyere ndị ọrụ...
UTorrent ozo bu onye ahia pere aka ma di mfe nke nwere ike iru oru nelu nyiwe niile. Nwere ike...